गायक राजेश पायल राई को अगालोमा बेरिने को हुन् यी युवती ? के उनीहरु प्रेममा छन् ? बिहेदेखि सम्बन्धको बारेमा यसरी खुलाए राजेश , हेनुहोस – Sapana Sanjal
June 29, 2021 199
Sapana Sanjal : काठमाडौ । दशकौ देखि नेपाली गित सङ्गीत पार्श्व गायन, आधुनिक सुगम सङ्गीत, पप देखि रक सम्म सबै क्षत्र मा एकछत्र राज गर्दै आएका राई इज किङ राजेश पायल राई को बिहे को चर्चा खुब हुने गर्दछ ।
Prevअब भाइरस सङ्क्रमणको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने सम्भावना कति छ ? चलिदैछ यस्तो कदम
Nextधमाधम फर्काइँदै चोरिएका ‘देवता’, २६ मूर्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा